पनि बाल्यकाल देखि सबै बालिका एक राजकुमार को सपना, दुल्हन, princesses, परियों हुन र उनको आमाको पोशाक मा प्रयास गर्न आफूलाई कल्पना गर्नुहोस्। यो एक परम्परा भएको छ। समय, छोराछोरीलाई एउटा स्वतन्त्र वयस्क व्यक्तिहरूले मा, तर एउटै शक्ति संग र विवाह भोजमा अगाडी देख कायापलट छन्। यो शानदार हिउँ-सेतो पोशाक, र पाठ्यक्रम को दुल्हन फूलगुच्छा - प्रति दुई कुराहरू यो रोमाञ्चक दिन कुनै पनि दुलही लागि महत्त्वपूर्ण छन्। दोस्रो बरु पहिलो भन्दा, कुनै कम ध्यान र बिस्तारै उपचार हुनुपर्छ।
यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्व मध्ये एक छनौट गर्न आउँदा, प्रश्न अक्सर खडा: "सबैभन्दा एक दुल्हन फूलगुच्छा बनाउन गर्छन् कसरी" हरेक दुलही सबै विशेष आफूलाई लागि विचार र सधैं यी तयार बनाएको विवाह bouquets को स्वाद संग एकै समयमा पर्नु छैन चाहन्छ। त्यसपछि के गर्ने? स्टार्टर्स लागि, तपाईं आफ्नो क्षमता मा शङ्का छ र उच्चतम स्तर मा सबै गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले राम्रो फूल बेच्ने व्यक्ति पाउन सक्नुहुन्छ र सँगै तिनीहरूले संरचना लेखन लिनुहोस्।
पहिले, तपाईंले यस्तो फूल, आफ्नो पोशाक संग धुन मा राम्रो हो र उत्सव भित्री मा पूर्ण फिट जो टिप्न गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूले पोशाक को पृष्ठभूमिमा संग पनि गाह्रो हुँदैन, तर पूर्ण अदृश्य हुन। बनाउन सुरु दुलही गरेको फूलगुच्छा उहाँले wilted छैन बिहान गर्न साँझ। छनौट रंग पनि धीरज र बल ध्यान गर्नुपर्छ जब को stems (मन्दहोता गर्न सकल खतरा)। तिनीहरूलाई कटौती diagonally र तुरुन्तै पानी हालिदिए - त फूलगुच्छा कृपया तपाईंले लामो हुनेछ।
रंग, सधैं, म थप चाहनुहुन्छ, तर यो मामला मा minimalist हुनुपर्छ। को फूलगुच्छा रूपमा सुविधाजनक र सजिलो हुनुपर्छ भनेर भूल छैन, क्रमशः, एक पर्याप्त लामो ह्यान्डल, तपाईं यसलाई सबै दिन लैजाने छ।
सबैभन्दा विवाह फूलगुच्छा कसरी बनाउने? तपाईं आफ्नो मनपर्ने फूल छानिएको एकपटक, तपाईं सपना गर्न शुरू गर्न सक्छन् र संरचना तिनीहरूलाई कस्नु गर्न। ठूलो सानो फूल बीच स्पेस भर्नु यसलाई ध्यान दिएर गर्न र समान रूप सबै वितरण गर्न प्रयास गर्नुहोस्,। तिनीहरूलाई केही यो पात देखि जारी गर्न आवश्यक छ।
मोती को विभिन्न प्रकार देखि साटन बेल वा साटन रिबन गर्न - सजावट, तपाईँ आफ्नो दिल कामनाहरु जो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं एक रूढिवादी व्यक्ति हुनुहुन्छ भने, सजाया कोमल unobtrusive फूलगुच्छा गर्छन्। यसो गर्न तपाईं यस्तो gerbera daisies, daisies, carnations, गुलाब रूपमा न्यानो घाम टन, को रंग भेट्नुपर्छ हुनेछ। म हेर्न सल्लाह सुनगाभाहरू विवाह फूलगुच्छा। फोटोग्राफी साँच्चै उत्कृष्ट छ!
Bouquet नाभिक देखि गरे। यो तपाईं, तीन पिभोट फूल लिन पात, thorns, ढाड तिनीहरूलाई सफा र सफासँग सँगै गाँसिएको आवश्यक हुनेछ भन्ने हो। त्यसपछि फूल को सर्कल बाँकी थप्नुहोस्। को फूलगुच्छा को इच्छित आकार तयार हुँदा, सबै तपाईं के गर्न छ, त्यसैले यसलाई कस को आफ्नो मनपर्ने विशेष पुष्प मुद्दा को stems बाँध र पिन संग कस्नु छ।
अब यो लामो लाग्छ वा आफै एक दुल्हन फूलगुच्छा कसरी बनाउने बाहिर आंकडा एक धनी कल्पना गर्न आवश्यक छैन छ। विभिन्न स्रोतहरू को प्रशस्त सजिलै संग तपाईंलाई मदत गर्न सक्नुहुन्छ। यो छुट्टी लागि रंग को विकल्प निर्धारण गर्न गाह्रो छ भने पत्रिका मार्फत हेर्न र विवाह bouquets हेर्न। सबैतिर फोटो।
तपाईं अन्धविश्वास हो भने, तपाईंले प्रत्येक एक फूल प्रतिनिधित्व गर्ने जानकारी निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, chamomile - निर्दोष, शुद्धता र विश्वासी प्रेम, peony एक प्रतीक - आनन्द र समृद्धि, र गुलाब - आवेग। मलाई आशा छ यो लेखले मदत गरेको छ, र तपाईं एक दुल्हन फूलगुच्छा नै कसरी बनाउने यसको आफ्नै योजना मिल्यो।
माणिक विवाह - प्रियजनहरूलाई देखि बधाई र शुभकामना
संस्कृति सम्बन्ध: यो के संलग्न मतलब?
को चपाउने दात ठूलो कसरी पाउन
सूची - यो ... प्रकृति र विशेषताहरु निर्धारण
आफ्नै हातले पुरानो लुगा नयाँ लुगा। आफ्नै हातमा लुगा को बदलाव: पुरानो नयाँ (फोटो) बाट
माछा tench: मछुवा गरेको सपना